Headphone ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံနှင့် ကျော်လွန်၍ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းအသစ်သောတရုတ် USB C အားသွင်းခြင်း Yong ဖန်
USB C အားသွင်း။ အသစ်စျေးနှုန်းချိုသာသောနားကြပ်ဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဈေးနှုန်း
ပံ့ပိုးမှုစင်တာ A2DP, AVRCP, HSP နှင့် HFP ပရိုဖိုင်းနားကြပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ -
1. ယာဉ်မောင်းယူနစ်: 40mm;
4. မက်စ်။ input ပါဝါ: 20mW;
5. Frequecny တုံ့ပြန်မှု: 20Hz -20kHz;
၁။ လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေး - ၁၀ မီတာ
2. Built-in အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ: 3.7V, 200mAh
၃။ ကစားချိန် - ၈ နာရီအထိ
၄။ ဖုန်းပြောဆိုမှု - ၈ နာရီအထိ
5. အားသွင်းအချိန်: 2.0 ~ 2.5hours
၆။ အဆင်သင့်အနေအထားဖြင့် ၁၅ ရက်အထိ -USB အားသွင်းကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ ကြိုးကြိုးမပါ ၀ င်ပါ
【 40mm neodymium အစွမ်းထက်သောဘေ့စ်မောင်းသူ။ ဒီကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနားထောင်ရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်အစွမ်းထက်သောဘေ့စ်မြင့်သောကြည်လင်ပြတ်သားမှုမောင်းနှင်အားများနှင့်အတူ
【နောက်ဆုံးကြိုးမဲ့ Bluetooth နည်းပညာ】 တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အစာရှောင်ခြင်း ဂီယာနားကြပ်နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည် ၅.၀ ဗားရှင်း Bluetooth ဗားရှင်း chipset၊
ush ခေါင်းအုံးကြီးများနှင့်ခေါင်းအုံးများ【 ဒီဘလူးတုသ်နားကြပ်သည်ရေတွင်းနှင့်အတူပါရှိသည် ကူရှင်ချုပ်ထားသောသားရေခေါင်းနှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ပျော့ပျောင်းသောနားကြပ်များ။ သူတို့ကအဘို့အဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ် နှစ်ရှည်သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသော passive noise isolation effect များဖြစ်သည် ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆူညံသံ။
ven အဆင်ပြေသောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်လွယ်ကူစွာအောက်ခြေထိန်းချုပ်မှု】ဒီကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုနားကြပ်ပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောခလုတ်သုံးခုဖြင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ခလုတ်တစ်ခုချင်းစီ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ထွင်းထားသော function ကိုအမှတ်အသားပြုထားသောခလုတ်တစ်ခုစီ၏ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်သည်။
Large ကြီးမားသောဘက်ထရီနှင့် USB C ပါဝါအားသွင်းရန်အတွက်နေရာလွတ်】စျေးနှုန်းချိုသာပြီးကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ဘက်ထရီအတွက်ကြီးမားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် micro5Pin USB ပါဝါအားသွင်းသည့်အပေါက်အစား၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပေါ် USB C အပေါက်နှင့်အတူဤဘလူးတုနားကြပ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ သင်ဤနားကြပ်ကိုဘက်ထရီစွမ်းအားဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
W ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်လိုင်းလိုင်း】ဤကြိုးမဲ့နားကြပ်သည်ဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ နားကြပ်၏အောက်ဘက်တွင် ၃.၅ မီလီမီတာအရွယ်အစားရှိသော audio socket ရှိသည်။ ၃.၅ မီလီမီတာချိတ်ဆက်မှုရှိသည့်မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုချိတ်ဆက်ထားသော audio cable မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
fitness ပိုကောင်းသောကြံ့ခိုင်မှုအတွက် ens တိုးချဲ့နိုင်သော Headband slides 】အသုံးပြုသူအမျိုးမျိုး၏အရွယ်အစားနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် headband ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ Headphone ၏အရွယ်အစားကိုဒီနားကြပ်၏လျှောဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းမှတဆင့်အလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။
【 EMC လိုက်နာမှုနှင့် RoHS အတည်ပြု Appro စံယုံကြည်စိတ်ချရအပြင် အိမ်၌လုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ဤကြိုးမဲ့နားကြပ်သည် EMC စစ်ဆေးမှုများနှင့် RoHS စစ်ဆေးမှုများကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, ဒီမော်ဒယ်ကိုလည်းပင်လယ်သို့မဟုတ်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်သောအစီရင်ခံစာများနှင့်ရှိသည် MSDS၊ UN38.3 နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောလက်မှတ်များ၊
ရှေ့သို့ Low Latency Gaming Mode Touch RGB Lights Dual Driver ကို True Wireless Earbuds Earphone ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
TV အတွက် Bluetooth နားကြပ်
မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့် Bluetooth နားကြပ်